Khasaaraha Rug Double xaaq Market Crypto Hantida - Blockchain News
Khasaaraha Rug Double xaaq Market Crypto Hantida
suuqyada cryptocurrency waa badda ah oo maanta cas, la top oo dhan 10 cryptocurrencies by cap suuqa warbixinta khasaare boqolkiiba double-god for ugu dambeeyey 24 saacadood.
Seeraar ayaa hoos 16 % isla muddadaas inay hooseyso 10-toddobaadka hoos $8,000 oo u oggolaan karo khasaaraha ugu xumaa todobaadle ah (in ka badan 25 %) tan iyo bishii April 2013. cryptocurrency The soo gaaray 30-boqolkiiba hoos u dhac ku January iyo waa hoos 45 % ku salaysan sanad-to-date.
calaamo ether Ethereum waa hoos by 28 %. cryptocurrency The dhugteen xad adkeysi horaantii Isbuucaan, ayaa lagu soo waramayaa ay sabab u tahay qulqulka caasimada hay'adaha iyo go'aan Venezuela ee presale cryptocurrency Petro on boosteejo ethereum ah. Si kastaba ha ahaatee, xajin dibiga u muuqataa in ay wiiqeen iyo Citaah ahaa ee la soo dhaafay arkay Ganacsi agagaarka $785.
Dhanka kale, Udhaqaajiyaa ayaa calaamo XRP kaalinta saddexaad liiska kuwa Khasaaray la a 35 boqolkiiba dhibic. cryptocurrency ayaa haatan u dhacday $0.635 - heerkii ugu hooseeyay tan Dec. 15. Taasi socota XRP ee bilowga xun in sanadka, la a 49 boqolkiiba inta lagu jiro January dayrta.
Guud ahaan, wadarta hantida suuqa oo dhan cryptocurrencies wada qaaday ayaa ka badan $100 billion.
Dheeraad ah oo ku hoos shaxda, Garaaci note dhif wanaagsan iyada oo ku madowgiisa iyo Cadaab, calaamo dahab Al-shabaab la odhan jiray DigixDAO (DGD) waxay u taagan tahay ka dib markii isagoo posted 30 boqolkiiba guulaha.
Maxaa cryptocurrency waxaa maal lagula talinayaa in ay iska iibiso, kaas oo ka mid ah si ay u sii?
dhamaadka puzzl May ...
Post Previous:Blockchain Observatory iyo Forum keena EU in "Safka hore" ee Blockchain Tech
Post Next:ETF Blockchain ugu horeysay Kanada ayaa ansixiyay nidaamiyo